DUFCADDII 12AAD EE KA BOGSADAY XANUUNNADA DHIMIRKA OO KA QALIN-JEBIYEY XIRFADO LAGU BARAY XARUNTA SAHAN! | Maanta Somaliland :: Somali News
DUFCADDII 12AAD EE KA BOGSADAY XANUUNNADA DHIMIRKA OO KA QALIN-JEBIYEY XIRFADO LAGU BARAY XARUNTA SAHAN!
Added by Xuseen Xarbi on August 6, 2021.
Cusbitaalka SAHAN oo lagu daweeyo, laguna daryeelo Dadka qaba Xanuunnada dhimirka ee Magaalada Hargeysa, ayaa lagu qabtay Munaasibad loo sameeyay Dad ka qalin-jebiyey Xirfado la baray markii ay ka bogsadeen xanuunkii dhimirka oo markii hore halkaa loo geeyay.
“Bashiir iyo taageerta Illaahay ha garab-galo, shaqo culus oo aad iyo aad u muhiim ah ayay hayaan. Dadka halkan wax ku bartyna waan bogaadinayaa. Haddii ay rabaan inay aqoontooda sii kordhiyaan, wasaaradda Waxbarashadu waxay diyaar u tahay inay taageerto. Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi hoggaamiyo, waxay mar kasta diyaar u tahay in muhiimadda la siiyo Arrimaha Bulshada. Markaa, iyadoo taa laga duulayo, waxaanu idinkala qayb-qaadan doonnaa horumarinta Xaruntan,” Waxa sidaas yidhi Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Axmed Abokor.
“Xarunta Sahan waxay ku jirtaa sannadkii 10aad, waxa soo maray dad ka badan 50-kun qof oo kala kala keenay dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba oo ay ku jiraan dad ka yimi dalalka deriska ee Ethiopia, Somalia iyo Jabuuti.
Sahan waxay ku tiirsan tahay afar tiir oo wax-ku-ool ah. Midi waxa weeyi barnaamij dadkaa naftood-hurayaasha ah ee aan anigu hormuudka u ahay. Ka labaadna waxa weeyi dadkaa waalidiinta ah ee dadkooda nala caawinaya. Ka saddexaadna waxa weeyi dhakhaatiirta Sahan oo iyaga laftoodu naftood-hurayaal ah. Waxa soo raaca tiir afraad oo ah ka dowladda oo gacan taageero na siisa; hadday yihiin Wakaaladda Biyaha, Wasaaradda Caafimaadka, Wasaaradda Arrimaha Bulshada iyo Wasaaradda Waxbarashada oo iyagu dhankooda dedaal ka wada.” Sidaas ayuu yidhi Guddoomiyaha Sahan, Bashiir Maxamed Jaamac.